अब सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड लागू हुने !
भदौ ०१, २०७५ रासस
काठमाडौँ, साझा यातायात तथा दिगो सार्वजनिक यातायातमा इ–टिकेटिङ तथा स्मार्ट कार्ड लागू हुने भएको छ ।
नेपाल बैंकको सहकार्यमा एनक्लाउड प्रालिले नेपालमा पहिलो पटक सार्वजनिक यातायातमा इ–टिकेटिङ तथा स्मार्ट कार्ड शुरु गर्न लागेको हो । यस प्रविधिमा नगद टिकट प्रिन्टिङ तथा स्मार्ट कार्ड दुवैको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी दिनमा स्मार्ट कार्डलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै पेट्रोलपम्प, पसल, पार्किङ, विद्यालय तथा कलेजमा समेत प्रयोग गर्न सकिने एनक्लाउड प्रालिद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्मार्ट कार्ड एक प्रकारको कन्ट्याक्टलेस कार्ड हो । जसबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । स्मार्ट कार्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरअनुरुप पैसाको सट्टा अहिलेको प्रविधिअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो कार्ड बसका सहचालकसँग किन्न सकिनेछ ।
दिगो सार्वजनिक यातायातमा भाडा तिर्दा दुई तरिकाबाट पैसा तिर्न सकिनेछ । पहिलो तरिकामा सहचालकलाई पैसा दिएर वा सहचालकसँग भएको डिभाइसमा कार्ड ट्याप गरेर टिकट लिन सकिने छ । दोस्रो, बसको ढोकामा राखिएको डिभाइसमा भाडा दर थिचेर कार्ड ट्याप गरेर पैसा तिर्न सकिन्छ । जसमा टिकट प्रिन्ट हुँदैन र त्यो केवल कार्ड भएको ग्राहकले मात्र गर्न सक्नेछन् । कार्ड रिचार्ज गर्न र कार्डमा ब्यालेन्स हेर्न सहचालकले प्रयोग गरेको डिभाइस मात्र प्रयोग गर्न सकिने छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, भदौ ०१, २०७५१९:२९
के तपाईलाई थाहा छ ? मानव शरीरका यी चिजहरु मृत्य पछि पनि जीउँदै हुने गर्छन् !
मासिक तलब भत्ताको रकम जम्मा गरेर पाँच स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स , अझै थप ५ वटा दिने घोषणा !
भेनेजुयलाबारे संचारमध्यममा आएका भ्रमपूर्ण समाचारप्रति अध्यक्ष प्रचण्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण !
आफ्नै श्रीमतीलाई बोक्सी भन्दै कुटपिट गर्ने श्रीमान जेलमा !
राष्ट्रिय पोशाक नाममा मात्र होइन व्यवहारमा लागु गरौँ: सत्यमोहन जोशी
अदालतले रिहा गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु किन पुनः पक्राउमा परे ?
अढाइ दशकदेखि माछाको व्यापारबाट करोडौँ आम्दामी !
४८ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका